पाठेघरमा मासु पलाउने समस्या : महिलाले थाहा पाउनैपर्ने कुरा | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
माघ ९, २०७५ बुधबार ११:४६:१३ | उज्यालो सहकर्मी
धेरै महिलामा पाठेघरमा मासु पलाउने समस्या देखिने गरेको छ । पाठेघरमा मासु पलाउने समस्या कस्तो हो ? पाठेघरमा मासु किन पलाउँछ ? पाठेघरमा मासु पलाउने बित्तिकै शल्यक्रिया आवश्यक छ वा छैन ? के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? यिनै विषयमा विना न्यौपानेले स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर नुतन शर्मासँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
अहिले धेरै वातावरणीय प्रभावले पनि बढेको देखिन्छ । जुन यो १५ वर्षको अन्तरालमा धेरै बढेको छ । चेतनाको विकासले पनि भूमिका खेलेको छ । कतिपय अवस्थामा अन्य समस्या लिएर अस्पताल आएका महिलालाई समस्याका आधारमा जाँच गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ पाठेघरमा मासु पलाएको रहेछ भनेर ।
प्रायः त यसको लागि अप्रेशन नै गर्नुपर्छ, तर अहिले अरु उपचार पद्धतिको पनि विकास भैसकेको छ । बिरामीको अवस्था र आवश्यकता हेरी उपचार हुन्छ । उसको उमेरले पनि भूमिका खेलेको हुन्छ, त्यसमा ।
जस्तै २५, ३० वर्षकी महिलाको सानो २, ३ सेन्टिमिटरको फाईब्रोईड छ, जसलाई बाँझोपनको कारण बनेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा अप्रेशन गर्दैनौं । ईन्जेक्सन दिएर त्यसलाई सुकाउने अनि बच्चाको योजनामा जाने हो । यदि यही समस्या ४०/५० वर्षको महिलामा देखियो, यसमा धेरैखालको समस्या छ भने मात्रै अप्रेशन गर्नुपर्छ ।
अहिलेको राम्रो कुरा यो छ कि जतिसुकै ठूलो फाईब्रोईड भए पनि अप्रेशन गर्नु पर्दैन । अहिले दूरबिनबाट अप्रेशन गर्न सकिन्छ । पाठेघर निकाल्न वा मासु निकाल्न दूरबिनबाट सजिलै सकिन्छ ।
यस्तो समस्या भएका महिलालाई पाठेघर झिक्नुपर्छ भन्दा डर लाग्नु स्वभाविक हो । सत्य त के हो भने पाठेघरमा मासु पलाउने बित्तिकै पाठेघर झिकेर फाल्नु पर्दैन । सामान्य शल्यक्रिया मायोमेक्टोमी अर्थात मासु झिकेर फाल्न सकिन्छ । पलाएको मासु ठूलो छ अर्थात ठूलो फ्याब्राइट छ भने मासु झिकेर बायोब्सी गरेर पनि उमेर पुगेको छ भने झिक्न सकिन्छ ।
हामीले कम उमेर भएका, सन्तानको रहर नपुगेका, औषधी गरेर निको हुने अवस्थाका महिलाको पाठेघर सकेसम्म फाल्दैनौं । कति महिलाहरु आफैं पनि पाठेघर झिकिदिनुस ढुक्क हुन्छ भन्छन् । तर, उनीहरुलाई औषधीले निको हुने अवस्था भएसम्म पाठेघर झिक्नु हुन्न भनेर सम्झाउने काम डाक्टरको हो ।
हिजोआज धेरै निजी अस्पतालमा पाठेघरसम्बन्धी समस्या हुनासाथ झिक्नुपर्छ भन्ने गलत अभ्यास भएको छ । झिक्नैपर्ने अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा पाठेघर झिक्नु हुन्न । फालिसकेपछि त्यसले अझ धेरै समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
सन्तानको रहर पूरा भएका, उमेर पुगेका, शल्यक्रियाबाहेक अन्य उपाय नभएका महिलाको हकमा भने मात्र फाल्नैपर्ने अवस्था हुन्छ ।
पाँच वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशत बिरामीमा फेरि पलाउने सम्भावना हुन्छ । किनकी प्रजनन क्षमता भएका महिनावारी हुने महिलामा पलाइरहन्छ । परिवारमा कुनै महिलामा यस्तो समस्या थियो भने अरुमा पनि हुन सक्छ ।
हामीले एक ठाउँमा पलाएको मासु पो फाल्छौं, फेरि अन्य ठाउँमा आउन सक्छ । दोहोरिन थाल्यो, परिवार पूरा भएको छ, रक्तश्राव रोकिएन, उमेर पुगेको छ भने पाठेघर फाल्नुस् भनेर सल्लाह दिन्छौं ।
झिक्नैपर्ने अवस्थाबाहेक शरीरको कुनै पनि अंग झिक्नु राम्रो होइन । पाठेघरको कुरा पनि त्यही हो । एक त सानै उमेरमा पाठेघर फाल्दा बच्चा नभएकालाई बच्चा हुँदैन, अब भन्नुहोस्, ३४/३५ वर्षको महिलाको पाठेघर फाल्नु राम्रो हो त ?
बाध्यताबाहेक उसको त पुरै बाँकी जिन्दगी बाँच्नु छ, समस्या हुन्छ नि । फालेपछि पनि बिभिन्न समस्या हुन्छ । हातखुट्टा गल्ने, धेरै काम गर्न नसक्ने समस्या पनि देखिन्छन् ।
यसमा ध्यान दिनुपर्ने त्यस्तो केही छैन । बिरामीलाई फलोअपमा बस्न भन्छौं । सानो ट्युमर छ, अरु लक्षण छैन भने हामी केही पनि गर्दैनौं । तीन तीन महिनामा अल्ट्रासाउण्ड गरेर ट्युमरको साईज हेर्छौं । यदि बिरामीलाई गाह्रो भएको छ भने उपचार त गर्नै पर्छ त्यसमा फेरि उसको उमेर हेरेर पनि हुन्छ । उमेर कम छ भने मासु मात्रै निकाल्ने, उमेर धेरै छ भने पाठेघर नै निकाल्ने गर्छौं ।
यदि सानो ट्युमर सानो छ, बढेके छैन उमेर ४०/४५ वर्षको छ भने त्यसले खासै असर गर्दैन । किनभने यो ट्युमर जहिलेसम्म महिनावारी हुन्छ, त्यही समयसम्म बढ्दै जाने हो जब महिनावारी सुक्दै जान्छ त्यो पनि घट्दै जान्छ । अर्काे कुरा फाईब्रोईडमा क्यान्सर हुँदैन । त्यसैले डरलाग्दो ट्युमर होइन यो ।
अहिले धेरै देखिने भनेको ३० देखि ४५ वर्षसम्मका महिलामा धेरै समस्या आएको छ । अनि बिहे नै नभएका २०/२५ वर्षका महिलामा पनि यो समस्या देखिएको छ ।
यो एकदम महत्वपूर्ण कुरा हो । सबैलाई थाहा हुनुपर्छ ।
यसबारे निम्न कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ :
– सबैभन्दा पहिला त जुनसुकै उमेरको भए पनि ६/६ महिनामा नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने ।
– २० वर्षभन्दा कम उमेरमा यौन सम्पर्क नगर्ने/बच्चा नजन्माउने ।